Akanjo mahazatra an'ny Veracruz, fampifangaroana eo amin'ny kolontsaina meksikana sy espaniola | Vaovao momba ny dia
Akanjo mahazatra an'i Veracruz
Luis Martinez | 13/04/2021 09:54 | kolontsaina, México
Ny akanjo mahazatra an'i Veracruz dia mamaly, etsy an-danin'izany, ny substrate autochthonous an'ny fanjakana Mexico ary, amin'ny lafiny iray, amin'ny fitaoman'ny mpanjanatany Espaniôla. Marina fa ny tanàna rehetra ao amin'ny faritr'i Veracruz ary na dia ny firenena rehetra aza manana ny azy manokana akanjo mahazatra, saingy misy ny fitoriana izay mamaritra ny fanjakana manontolo sy ny renivohiny.
Satria i Veracruz dia eo amin'ny morontsiraka atsinanan'i México ary manana toetr'andro tropikaly mafana izy, ny fitafiany mahazatra dia tsy maintsy, an-keriny, maivana ary tsy mafana be. Ny mari-pana antonony mihoatra ny degre roapolo dia tsy zaka mandritra ny taona miaraka amin'ny akanjo mafana. Saingy misy singa hafa maro izay namaritra ny akanjo mahazatra an'i Veracruz. Raha te hahafantatra azy ireo ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1 Tantaran'ny akanjo mahazatra an'i Veracruz
2 Manao ahoana ny akanjo jarocho
2.1 Ny akanjo mahazatra Veracruz ho an'ny vehivavy
2.2 Akanjo mahazatra an'ny Veracruz ho an'ny lehilahy
3 Rahoviana no ampiasaina ny akanjo jarocho mahazatra
Tantaran'ny akanjo mahazatra an'i Veracruz
Ny zavatra voalohany tokony hamafisinay aminao dia ny fanjakan'ny Veracruz koa mampiasa ny palitao charro ary ny Fitafiana Tehuano. Ity farany dia nampiasain'ny vehivavy Zapotec ao amin'ny fanjakan'ny Oaxaca ary maty tsy navelan'ny mpanao hosodoko Frida khalo amin'ny sary hosodoko maro. Fa izy roa sy ny voalohany dia nanjary tandindon'i Mexico. Noho izany, tsy hahagaga anao fa mitovy amin'ny Veracruz ihany koa izy ireo.
Na eo aza ny zava-drehetra izay vao nohazavainay taminay, dia antsoina hoe ny hatsaram-panahy mitovy amin'ny Veracruz akanjo jarocho, izay avy amin'ilay antsoina hoe Sotavento Veracruzano, izany hoe, ny faritry ny fanjakana izay manana anaram-piangonana izay manitatra atsimon'ny iray ihany. Ary koa, ity akanjo ity dia manana tantara tena mahaliana.
Voalaza fa tonga ny vehivavy voalohany niaraka tamin'ny Espaniola ho an'ny Fantsona Papaloapan fanaon'izy ireo ny nitondra ny akanjo avy any amin'ny Saikinosy Iberia. Ry zareo dia Akanjo fomba Andalusia na Levantine vita amin'ny lamba maizina sy mavesatra. Saingy eto amin'ity faritra Veracruz ity, araka ny efa nolazainay taminao, dia mafana be izy, ary ankoatr'izay, manjaka ny hamandoana. Noho izany, ny akanjo nalaina avy tany Espana dia tsy nety, satria natao ho an'ny toetrandro mangatsiaka kokoa izy io.
Ireo zotom-behivavy ireo dia misy zipo miloko, zorony vita amboradara, aloky ny dantelina, stockings vita amin'ny landihazo ary kiraro volory. Ho fanampin'izany, dia noravahan'izy ireo medaly niraikitra tamin'ny vozona tamin'ny kofehy landy na volory manokana.
Akanjo mahazatra Veracruz ho an'ny vehivavy
Na izany aza, ny vehivavy teratany dia nanao zipo feno voninkazo sy blouse misy dantelina bobbin sy soroka nilatsaka ary koa kiraro miendrika clogs. Azon'ny Espaniola ny fomba mety kokoa ity akanjo ity ho an'ny toetrandro Veracruz ary nanomboka nandao ireo akanjo nentiny avy tany Espana izy ireo.
Toy ny fifangaroan'ny akanjo eo an-toerana miaraka amin'ny fitaomana Hispanika sasany, ny akanjo jarocho, izay naka endrika mitovy amin'ny lehilahy ihany koa. Noho izany, fizotra syntheta eo amin'ny lamaody peninsular sy ilay teratany avy any Sotavento Veracruzano. Ho fanampin'izay, nasiana kojakoja sy firavaka.
Raha vantany vao nahavita tantara kely isika dia fotoana izao hanazavana marimarina sy amin'ny antsipiriany hoe manao ahoana ny akanjo mahazatra an'i Veracruz.
Manao ahoana ny akanjo jarocho
Raha ny lojika, mba hamaritana ny akanjo mahazatra an'ny Veracruz dia tsy maintsy manavaka ny akanjo ho an'ny vehivavy sy ny an'ny lehilahy isika. Na izany aza, samy manana ny anaram-piangonana iraisana roa: loko fotsy sy lamba maivana mety amin'ny hafanana.
Ny akanjo mahazatra Veracruz ho an'ny vehivavy
Akanjo Jarocha ho an'ny vehivavy dia tsara tarehy kokoa aza fa tsy natao ho an'ny lehilahy, satria efa dantelina, amboradara sy firavaka bebe kokoa. Ireto ny singa fototra amin'ity akanjo ity:
Blouse karazany akanjo mandry fotsy vita amin'ny landihazo sy "harato" amin'ny soroka sy tratra. Midika izany fa, amin'ireo faritra ireo, dia misy amboradara amin'ny endrika kofehy. Ho fanampin'izany, vitaina amin'ny tendany amin'ny barrette vita amin'ny kofehy landy izy io.
Ny Petticoat koa dia fotsy ary misy tadiny koa eo amin'ny farany ambany izay ampiasaina aorina.
Una zipo lava sy malalaka manidina ambonin'ilay petticoat manarona ny kitrokely ary fotsy ihany koa matetika. Toy izany koa, voaravaka amboradara ary taloha lakaoly kely.
Apron fohy kokoa amin'ny volory mainty ary voaravaka voninkazo miloko mena ary koa dantelina olioly. Mamatotra ny andilana amin'ny alàlan'ny a kofehy landy ary eo am-balahany no misy a bandana vita amin'ny landihazo, izany hoe mosara lehibe vita amin'ny lamba vita pirinty misy loko roa.
Una mantilla na shawl azo vita amin'ny dantelina na tulle amboradara. Apetraka eo an-tsoroka mifatotra amin'ny tratra amin'ny alàlan'ny a locket na sauo hanasongadinana ny harin'ny akanjo mandry ao ambany.
Un shawl na shawl faharoa namboarina tsara tamin'ny kofehy landy ary izany dia atambatra amin'ny kofehy mandravaka ny volo.
Vehivavy manao akanjo jarocho
Miaraka amin'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, ny akanjo mahazatra an'ny Veracruz ho an'ny vehivavy dia misy koa kojakoja samihafa y taovolo manokana. Mikasika ny farany dia misy bun sy randrana roa izay voaravaka volon-doha ho toy ny sisiny, antsoina koa hoe cachirulo. Ary farany, ny volo dia voaravaka zaridaina na raozy apetraka amin'ny ilany na amin'ny lohan'ny loha miankina amin'ny toetran'ny fanambadian'ilay olona. Raha mpitovo izy dia mandeha miankavia izy ireo, ary raha manambady izy dia mankany amin'ny ankavanana.
Raha ny momba ny kojakoja amin'ny akanjo mahazatra Veracruz ho an'ny vehivavy, a mpankafy ahantona amin'ny hatoka amin'ny alàlan'ny a vozon'akanjoko. Matetika vatosoa ao amin'ny fianakaviana io. Izy io dia azo vita amin'ny volamena na perla, fa koa vato harana na filigree. Ary farany, amin'ny tranga sasany, ny hazo fijaliana koa dia mitafy ny vozona amin'ny kofehy volory.
Akanjo mahazatra an'ny Veracruz ho an'ny lehilahy
Maro mora kokoa fa ny etsy ambony dia ny akanjo mahazatra Veracruz ho an'ny lehilahy. Na izany aza, tsara tarehy ihany koa izy io ary, araka ny nolazainay taminao, dia misongadina amin'ny loko fotsy amin'ny akanjo rehetra. Amin'ity tranga ity, ny zava-dehibe indrindra dia ireto manaraka ireto:
Un pataloha vita amin'ny lamba vaovao izay mahatratra ny tongotra, izany hoe tsy toy ny akanjo mahazatra hafa, fa tsy kitapo na lava-lava.
Una guayabera na lobaka misy tanany lava, malalaka ary vita amin'ny lamba maivana misy kitapo koa eo aloha. Matetika koa izy dia manana pleats hanome azy ny kanto.
Karaoty kiraro babo ary loko mainty na fotsy.
Satroka palmie misy hantsana efatra ao amin'ny faritra avony (izay antsoina hoe "vato").
Palliate na mosoara lehibe miloko marevaka, mena kokoa sy mainty kokoa, manodidina ny hatoka.
Raha nanazava taminao izahay ary azonao tsoahina amin'ny filazalazana nataonay, ny akanjo mahazatra an'ny Veracruz ho an'ny lehilahy dia kely kokoa noho ny an'ny vehivavy. Na izany aza, mitambatra tanteraka amin'ity.
Vondron'olom-pirenena Veracruz miaraka amin'ny akanjo mahazatra
Rahoviana no ampiasaina ny akanjo jarocho mahazatra
Amin'ny ankapobeny, ny akanjo jarocho dia ampiasaina ao misy hetsika folk na fialantsasatra ankalazaina ao amin'ny fanjakan'ny Veracruz. Tarika mpandihy nentim-paharazana maro no mampiasa azy, mazava tsara, mba handikana ny Jarocho na zapateado izy ireo. Misy karazana dihy roa: mpivady feo ary ilay antsoina hoe "Avy amin'ny antontany" ho an'ny dihy ao anaty vondrona.
Ny mozika miaraka dia lalaovina zavamaneno nentin-drazana mitovy toy ny jarana, gitara kely; ny fangatahana, avy amin'ny fianakaviana iray mitovy amin'ilay teo aloha; ny lokanga, ny ampongatapaka sy ny valanoranon'ny ampondra, ary ny valiha ho an'ny amponga. Amin'ny alàlan'izy rehetra ireo dia adika feonkira niavian'ny tantsaha, ny sasany amin'izy ireo dia nanjary malaza manerantany. Ohatra, La Bamba, Ilay hustler o Ny syrup adala.
Adika koa izy ireo huapangos, feon-kira ao amin'ny sonia fe-potoana ternary niainga tao amin'ny faritra, ary koa ny gadona Afro-Karaiba fiaviana toa ilay danzón kiobàna malaza.
Etsy ankilany, ho liana amin'ny hahafantatra ihany koa ianao amin'ny fotoana hanaovana ireo fankalazana ireo. Araka izany, raha mikasa ny hitsidika an'i Veracruz ianao dia azonao atao ny mifanitsy amin'izy ireo amin'ny dia. Ny iray amin'ireo daty voalaza dia ny karnavaly avy ao amin'ny tanànan'ny Veracruz mihitsy, nofaritana ho "sambatra indrindra eto an-tany."
Saingy ny tontolon'ny Jarocho dia nahita honenana tao an-tanànan'i Jaltipan, avy amin'ny fanjakan'ny Veracruz mihitsy. Amin'ny faran'ny taona ity tanàna ity dia mandrindra ny Fetiben'ny Fandango, izay mampivondrona ireo mpanakanto mozika malaza avy amin'ny lafivalon'ny firenena na hatrany ivelany. Noho izany, ny feo sy ny dihy jarocho dia tsy afaka tsy eo amin'ity hetsika ity.
Toy izany koa, ny fomban-drazana Jarocha dia manana fakany lalina ao an-tanànan'i Córdoba, antsoina koa Lomas de Huilango, hatreto amin'ny fandaminany a Son Jarocho Encounter izay ahitana seho miaraka amin'ny akanjo mahazatra an'i Veracruz. Fa koa ny hetsika hafa toy ny atrikasa, fivoriana, fihaonambe ary koa fiasa gala mba hitehirizana ity kolontsaina nentim-paharazana an'ny fanjakana Veracruz ity.
Farany, holazainay aminao ny momba ny tanànan'i Tlacotalpan, izay eo amin'ny fetran'ny tanànan'i Papaloapan no misy azy, izay teraka, araka ny efa nolazainay taminareo, ny akanjo jarocho. Ao amin'ity tanàna tsara tarehy ity, izay naseho ny ivon-tantara manan-tantara Lova ara-kolotsaina amin'ny maha-olombelona, dia ankalazaina amin'ny Fihaonan'i Jaraneros sy Decimistas. Izy io dia festival natokana hitehirizana ireo feon-kira rehetra izay atambatra ao amin'ny son jarocho ary anisan'ny hetsika folkloric manan-danja indrindra eran'i Mexico izy io.
Ho famaranana, nohazavainay taminareo ny antony niavian'izy ireo akanjo mahazatra ny Veracruz, ary koa ny akanjo mahaforona azy ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy. Ary toy izany koa, inona ny fety malaza indrindra anaovana azy. Na ahoana na ahoana, io dia iray amin'ireo akanjo nentim-paharazana miaraka miorim-paka kokoa ary mankasitraka kokoa manerana ny firenena meksikana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » México » Akanjo mahazatra an'i Veracruz
Boky fitsangatsanganana 10 be indrindra ho an'ireo mpitia mpizaha tany
Dia an-tongotra manamorona ny Costa Dorada: inona no ho hita sy inona no hatao